Sideebaad ku Ogaankartaa Caanaha Naaska Hooyadu In Ay Ku Filan Yihiin Ilmaha | Hawraar
June 8, 2016 Xiisaha/Xulashada
Sideebaad ku Ogaankartaa Caanaha Naaska Hooyadu In Ay Ku Filan Yihiin Ilmaha
Waxaa iska caadi ah in ay hooyakastaa ka warwarto caano siinta ilmaha marka ay bilawdo naas nuujinta hooyooyin badan oo ka warwarsan inta ay dhanyihiin caanaha naaskeeda iyo in uu helo caano ku filan si u daboolo bahida koriinkiisa
Sida ugu fiican ee aad ku ogaan karto inaad soo saarayso caano ku filan ilmahaaga waa ilmaha miisankiisa oo siyaado iyo heerka koriinka caadiga ah, waa iska caadi ilmaha yarka inuu lumiyo maalmaha yar ee ugu horeeya misaankiisa laakiin dib wuxu kordhaa miisankiisa 3-4 maalmood dhalashadiisa kadib waxaa caado ah ilmaha ama dhalaanka marka ay jogaan 14 malmood in ay dib ugu noqdaan misaankii marka ay dhasheen ahaayeen .
Waxaa jira calamado kale oo aad ku garan karto in ilamahaaga yar uu helay caano ku filan sida:
In ilmaha yar naas nuujintiisu noqoto 6-8 (lix ilaa sideed) jeer maalintii iyo in uu ka qanco naas nuujinta ka bacdi
Waxa aad arki kartaa ama maqli kartaa ilmahaaga marka uu liqaayo caanaha.
Wuxu ilmuhu kaashayaa 24kii saac ugu yaraan 7 jeer markuu xaaro xaarkiisu waa jaale ay la socdaan kuus kuus yar.
Naas siinta ilmaha si joogta ah in ku filan waxay muhiim u tahay inay kaa caawiso inaad soo saarto caano joogta ah oo ku filan ilmahaaga , hadii uu yahay ilmahaagu mid hurdo badan waa inaad u toosisaa si maskixiyan ah una siisa naaska waxay taasi sabab u noqonaysaa in uu naaskaagu soo saaro caano badan jidhkuna wuxuu la qabsanayaa caanihii looga baahan jiray maalinkii .
Hadii aad ka shakido caano yaraansho ama aad ka shakido miisaanka ilmahaaga la xidhiidh dhakhaatiirta si ay talo kuu siiyaan.
Waxaa mudo dheer loo isticmaalayay in lagu kordhiyo caanaha. xulbada waxaa ku jira fiitamiino caafimaad badan oo u fiican hooyooyinka ilmaha nuujiya sidoo kale waxaa ku jira dufanka caafimaadka leh ee loo yaqaan omega 3 kaasoo muhiim u ah kobaca maskaxda ilmaha. Xulbada waxaa kaloo ku jira birta iyo macdanta calcium.
Waa geed dhaqameed kordhiya caanaha naaska waxaa kale oo uu hoyooyinka ka cawiyaa ka hortaga gaaska iyo calool xanuunka ilmaha.. Waxaa u egyahay xawaash dhuudhuubka.
Xanuuno badan ayay dawo u tahay sida kor u qaadida difaaca jirka, ka hortaga wadna xanuunka sidoo kale toontu waxay u fiicantahay hooyada irmaan waxay u qaadaa caanaha naaska ,lakiin hadaad cunto toon badan waxay saamayn ku yeelanaysaa dhadhanka iyo urta caanaha naaska.
Akhriso: Faa’iidooyinka caafimaad ee naaska
Khudrada caleenta cagaaran sida koostada waa ilaha oogu fiican macdanta sida birta, kaalshiyamta, foolatka (folate), sidoo kale fiitamiin A waxaa kaloo la aaminsanyahay in ay kor u qaadaan caanaha naaska hooyada irman marka hooyada irmaan waxaa lagula taliyaa in ay cunto maalinkii 1-2 mar.
Waa il qani ku ah macdanta kaalshiyaamta (calcium) waana macdan muhiim u ah hooyada irman ama lamaan.
Khaasatan misirta casaanka ah ama guduudan ma kordhiyaan oo kaliya caanaha naaska ee sidoo kale waa isha brotiinka waxay leedahay oo kale fiber badan iyo iron.
Sidoo kale waxaa jira contooyin kale oo kordhiy caanaha naaska sida
Saalaxida naaska ma kaa caawin karaa soo saarida caanaha naaska?
Naasaha oo la salaaxo ma kordhiyaan caanaha naaska ,lakiin waxay furaan xididada ama tuyuubada xidhan ayay furaan waxay bi’yaan kuus kuuska naasaha waxay yareeyaan khatarta naasaha
Si walbo ooy ahaato waa in si maskixiyan ah loo salaaxaa naasaha hadii sii xoog ah loo salaaxo waxaa dhawacmaya xididada ka soo saara naaska caanaha
Waxaa fiican in aad adigu salaaxato madaama aad dareemayso cadaadiska ay u baahanyihiin.
W/D: Sacdi Caweer